musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Turkey Kuputsa Nhau » Turkey inotyisidzira kudzinga US uye mamwe mamishinari gumi nemapfumbamwe
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Kodzero Dzevanhu • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Nhume dzeGermany, Canada, Denmark, Finland, France, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden neU.
Muzvinabhizinesi weTurkey uye philanthropist, Osman Kavala, akasungwa ari mutirongo asina mhosva kubva mukupera kwa2017.
Kavala anotarisana nenhamba yakawanda yemhosva, kusanganisira kupomerwa mari yekuratidzira kwaErdogan uye kutora chikamu mukupokana kwa2016.
Vatsigiri vaKavala vanomutenda semusungwa wezvematongerwo enyika, akatarirwa basa rake rekodzero dzevanhu muTurkey yeErdogan 'inowedzera hutongi.
Munguva yehurukuro yeruzhinji nhasi, Mutungamiri weTurkey Recep Tayyip Erdogan vazivisa kuti vapa gurukota rezvekunze kwenyika kuti vadome vamiriri vedzimwe nyika gumi Teki, kusanganisira mumiriri weUS, 'persona non grata'.
"Ndakapa mirairo inodiwa kugurukota rezvekunze, ndakati muchabata kushorwa kwevamiriri gumi nekukurumidza," akadaro Erdogan.
Erdogan'hasha dzakakonzerwa nemashoko akabatanidzwa, akaburitswa nevamiriri gumi kutanga kwesvondo rino.
Nhume dzakakurudzira kugadzirisa nekukurumidza uye kwakarurama kune nyaya yaOsman Kavala - muzvinabhizimisi weTurkey uye philanthropist akachengetwa mujeri asina mhosva kubva pakupera kwa2017.Erdogan kuratidzira uye kutora chikamu mukupokana kwa2016. Vatsigiri vaKavala, zvisinei, vanomutenda semusungwa wezvematongerwo enyika, akanangana nebasa rake rekodzero dzevanhu muErdogan ari kuwedzera hutongi. Teki.
Chirevo chakabatanidzwa chakaburitswa kuratidza gore rechina rekusungwa kwaKavala kekutanga. Muzvinabhizimisi akatotongwa uye akaregererwa kaviri pamhosva dzine chekuita nemhirizhonga yeGezi Park ya2013 uye 2016 yakakundikana. Izvi, zvisinei, hazvina kuita zvakanaka Kavala, sezvo mirairo yekusunungurwa yakadzorwa nemhosva itsva mushure mekuregererwa.
Pakarepo mushure mekuburitswa kwechirevo chemubatanidzwa, vamiriri veGermany, Canada, Denmark, Finland, France, Netherlands, New Zealand, Norway, Sweden neUS vakashevedzwa kuBazi rezvekunze reTurkey pamusoro pekutaura kwavo "kusava nehanya" uye "kuita zvematongerwo enyika [ ye] nyaya yeKavala."